Teknoolojiyada sii kordhaya ee barafka Holland | December 2019
Ugu Weyn Ee Teknoolojiyada sii kordhaya ee barafka Holland
Barashada si ay u beeraan baradhada iyadoo la isticmaalayo teknoolajiyada Dutch
Beeraley kastaa wuxuu ku koraa baradho halkan, laakiin kaliya hal qof 10 ka mid ah ayaa hela dalagyada wanaagsan. Ka dib oo dhan, waxaan dhamaanteen caadaysteen in, in dhirta this ma aha xajmiga ugu. Laakiin, marar badan waxay dhacdaa iyada oo aan dadaal badan iyo natiijada aan la helin. Maanta waxaan rabnaa in aan si faahfaahsan u sharaxno nuxurka iyo astaamaha beerashada baradho iyadoo la adeegsanaayo tiknoolijiyada Hollandka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Teknoolojiyada sii kordhaya ee barafka Holland 2019